Momba ANAY | Doc.com
Doc.com dia natomboka tamin'ny iraka hanomezana an'izao tontolo izao endrika fitsaboana maimaimpoana maimaimpoana maharitra izay maharitra ary tsy miankina amin'ny rafitra fitsaboana nentim-paharazana napetraka amin'ny faritra rehetra eto amin'izao tontolo izao.
Hatreto dia nanome serivisy fitsaboana i Doc.com tsy misy vidiny vola ho an'ny marary an'arivony maro any amin'ny firenena 20 manatsara ny fiainany. Nahatanteraka izany tamin'ny famoronana modely ara-barotra vaovao mba hahatonga ny "Fikarakarana Fahasalamanana Maimaimpoana" ho an'izay rehetra manana solosaina na finday avo lenta.
Charles Nader dia nanolotra ny maodely vaovao ho an'ny mpampianatra azy ao amin'ny programa Stanford's Blitzscaling izay nahitana an'i Ried Hoffman, mpanorina an'i Linkedin sy Chris Yeh, mpanoratra raharaham-barotra malaza ary kapitalista mpiambina. Taorian'ny nahazoana valiny tsara ary niantso an'i Chris Yeh ilay maodely telemedicine ho vokatra 10X, nanangona vola ny orinasa hampivelarana ny singa angon-drakitra blockchain ary hanitatra ny serivisy any amin'ny firenena hafa ivelan'i Mexico. Izany dia nanome ny orinasa ny fahaizana manitatra firenena 20 mahery any Amerika Latina ary mampitombo ny fivoarany mba hanolorana tolotra vokatra matanjaka kokoa, mpanjifa marobe, ary koa manatsara sy manatsara ny orinasa toy ny fividianana ny anarana Doc.com ary hampitombo ny fivoarana ara-teknolojia sy fandraharahana amin'ny sehatra hafa eo amin'ny sehatry ny fahasalamana. Doc.com dia nanitatra ny serivisy nampiany tamin'ny alàlan'ny fampidirana fanafody any an-trano any Mexico ary lasa mpaninjara fanafody any Amerika Latina. Charles Nader, CEO an'ny Doc.com, dia nasongadina tao amin'ny magazina Cover of Forbes indroa misolo tena an'i Doc.com. Notondroin'ity gazety ity ho toy ny unicorn amerikana latina ilay orinasa ary voatonona amina famoahana sy haino aman-jery maro hafa.
Androany, Doc.com dia manolotra ny serivisy "Fikarakarana Fototra Fototra Vidy", ary koa serivisy sarany mora vidy, amin'ny fiteny zato mahery amin'ny endrika lahatsoratra sy amin'ny telemedicine horonan-tsary anglisy sy Espaniola amin'ny alàlan'ny Doc App, any amin'ny firenena 20 mahery any Amerika Latina ny ankamaroany. sy Etazonia miaraka amina drafitra fanitarana ho an'izao tontolo izao.
Ny mpanjifa dia misy orinasa fiantohana, Telecom, ary ny hafa amin'ny indostria isan-karazany. Tonga mpiaramiasa ofisialy amin'ireo mpamatsy vaksiny mandritra ny areti-mandringana i Doc.com hanome fanafody Covid ho an'izao tontolo izao. Amin'ny alàlan'ireo fiaraha-miasa ireo, miaraka amin'ny fanohanan'ny governemanta. Doc.com dia manome lanja ireo tolotra vokariny hanampiana ireo olona sahirana mandritra ny areti-mandringana.
Amin'ny alàlan'ny fahafantarana ny tratry ny haitao izay manavao ny tontolo iainantsika, dia nanambatra teknolojia i Doc.com ary namorona maodely vaovao hamelomana ny vokatra azo avy amin'ny fanadihadiana momba ny epidemiolojika, ny crypto-economie blockchain, ny telemedicine ary ny fivarotana fanafody hanomezana marary bebe kokoa maimaimpoana. serivisy fitsaboana. Izy io dia namolavola rafitra tena maharitra izay tsy vitan'ny fitaovana siantifika ho tombontsoan'ny zanak'olombelona, fa manome ny fanampiana ilaina amin'ny olona sahirana manerantany miaraka amin'ny zavatra inoantsika fa lafiny lehibe indrindra amin'ny fiainana… Fahasalamana.
Satria raha tsy misy fahasalamana dia fahasalamana ara-tsaina na fahasalamana ara-batana; Tsy mahavita ny tsara indrindra vitany ny zanak'olombelona.
Fikarakarana ara-pahasalamana maimaimpoana maimaimpoana ho an'ny rehetra ... Zon'olombelona… Navoakan'i Doc ny kinovainay izay tsy mitsaha-mivoatra sy mitombo rehefa mandeha ny fotoana miaraka amin'ny làlana mamirapiratra mankany amin'ny ho avy sy ny valiny azo refesina. Misy vokany tsara ny fiainana.
Tranonkala novolavolain'i Lou.